WATCH: Esther Chungu Debuts New Video “Cikangabwe” feat. 412 - GMusicPlus.com
Home/Videos/Esther Chungu Debuts New Video “Cikangabwe” feat. 412
SONJul 8, 2020
Award-winning Zambian music sensation, Esther Chungu has released a brand new music video in support of her latest single “Cikangabwe” featuring 412. The colorful and vibrant visual was pictured by Qbick The Visual Papi.
“Cikangabwe,” is a taste of what fans should expect from Esther Chungu‘s forthcoming sophomore project – the follow-up to her 2017 debut, Mubanga.
Peep into the amazing new visuals below;
Esther Chungu Releases New Song “Cikangabwe”